.Lọ > Ngwaahịa > Iko Iche Ngwọta Ahụike
Igwe nchedo ọgwụ, nke a na-akpọkwa ọkpọ gọọlfụ
Igwe nchedo ọgwụbụ akụkụ dị mkpa nke ịwa ahụike na akụrụngwa na-echebe kwa ụbọchị.Igwe nchedo ọgwụenwere ike ekewa n'ime iko nchebe nkịtị na iko nchebe pụrụ iche dabere n'ọrụ ojiji.
Igwe nchedo ọgwụenwere ike iji ya maka nchedo kwa ụbọchị megide ohere nke ụmụ irighiri mmiri na-asachapụ anya na nje na-efe efe.
Mpempe na-ete ume, ihe na-eme ka mmiri gbazee, anti-fogAnti-spatter, uzuzu uhere, ihe ịgba-mmiri, ihe ịgba-ikuku na ihe ndị na-emetụta ya. Ọ nwere nnukwu ọkụ na-enyefe, dị nro ma nwee ntụsara ahụ, ihe ọkụ, ma ọ dịghị pịa imi ogologo oge.
Igwe na-ahụ maka mgbochi na - enyo enyo
Ihu Igwe Ọkụ na-ahụ maka mgbochi na-ahụ irighiri mmiriAnti-fog goggles health healthAnti-fog goggles, iko na-ahụ maka ahụike, a na-akpọkwa anti-fog gogglesAnti-fog goggles ọgwụ nchebe bụ akụkụ dị mkpa nke ịwa ahụike yana nchebe onwe onye kwa ụbọchị megide nje. A kwadebere ha kpuchie ọgwụ iji chekwaa nje na nje nje. A ga-eji iko na-ahụ maka enyocha anya kwa ụbọchị iji chebe ụmụ irighiri mmiri nke na-efesa anya na oria nje. A na-eji iko nchebe ahụike elele ma ọ bụ na-agwọ nsị nke anụ ahụ, mgbawa ọbara ma ọ bụ ndakasị ahụ na ụlọ ọgwụ ọgwụ.Anti-fog goggles ọgwụ na-echebe iko ngwaahịa na atụmatụân Large lens Design, nwere ike ịkekọta ọnụ na myopia.
Iko Iche Ngwọta Ahụike Azụ ahịa Iko Iche Ngwọta Ahụike nke emepụtara na China site na ụlọ ọrụ anyị. Anyị ụlọ ọrụ a na-akpọ Zhongxinchuang. nke bụ otu n’ime ndị na-emepụta na ndị na-ebubata ihe si China. Nabata ịzụta Iko Iche Ngwọta Ahụike jiri ọnụ ahịa dị mma nke nwere CE, FDA, COI, PMD Act na NIOSH. You chọrọ ndepụta ọnụahịa na nkọwapụta? Ọ bụrụ na ịchọrọ, anyị nwekwara ike ịnye gị.